Degdeg:- MD Farmaajo oo qaaday talaabo aan horay loo arag “wuu celiyay dhalashadiisi mareekanka”. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Previous articleSomaliland oo markii ugu horreeysay Hambalyada 1da August udirtay Dowladda Puntland.
Next articleDegdeg:- Duqii Muqdisho oo la xaqiijiyay inuu ugeeriyooday dhaawacii soo gaaray.
awkuus August 1, 2019 At 2:10 pm
War ninkaan yuu idin waalin waa Beenaale . Soomaaliya waaba lagu kala cararay markaasuu leeyahay USA, ayana celinaayaa President Beenaale waaye